UKHUTHAZA INTSHA UKUTHI INGAZIBANDAKANYI NEZIDAKAMIZWA – Sivubela intuthuko Newspaper
By admin	 On Jun 12, 2020 326
UMnuz Lwazi Sithole ukhuthaza intsha ukuthi ingazibandakanyi nezidakamizwa kowa isebenzise amathuba ukuzithuthukisa
UKHUTHAZA intsha ukuba ingazibandakanyi nezidakamizwa ohlala emgwaqweni. UMnuz Lwazi Sithole (28) osehlale emigwaqweni ehlukene eThekwini iminyaka engaphezu kwemihlanu uthi izidakamizwa zenze omkhulu umonakalo empilweni yakhe walahlekelwa amathuba abengamenza abe umuntu ongcono.
Njengoba inyanga ka June, kuyinyanga lapho kukhunjulwa khona intsha yangonyaka ka 1976, uMnuz Sithole uthi instha kumele isebenzise amathuba enikwa wona ukuzithuthukisa kanye nomphakathi ehlala kuwo.
“Mina ngibe nethuba lokuba ngibe usaziwayo, nokuthi ngiyofunda esikhungweni esiphakeme kodwa ngadlala ngalo lelithuba ngahlangana nabangani abangalungile ngagcina sengingena nasezidakamizweni,” Kusho uMnuz Sithole.
Lensizwa esencane ingomunye wabaningi abahlala emgwaqweni ababekwe ezikhungweni ezihlukene ezihlelwe umasipala weTheku ukugwema ukubhebhetheka kwegciwane lecorona. Uthi loluhlelo lukamasipala luyishintshe kakhulu impilo yakhe njengoba esezimisele ngokuthola umsebenzi ozomsiza asuke emgwaqweni.
Njengamanje uMnuz Sithole, ungomunye wabasizayo e Denis Hurley Centre, okungesinye sezikhungo ezigcine abahlala emgwaqweni ngokusebenzisana noMasipala weTheku kanye nezinye izinhlangano ezizimele. Uthi selokhu afika kulesikhungo usefunde okuningi njengoba esekwazi nokusiza ekhishini lakhona. Uthi ukuhlala kulesikhundla kuphinde kwamsiza ukuthi akwazi ukuzithiba agweme ukusebenzisa izidakamizwa.
“Sengihlale isikhathi eside kakhulu emgwaqweni bese ngikhohliwe ukuthi injani impilo okungeyona eyasemgwaqweni. Kulesikhungo sithola ukudla kathathu ngosuku, siyageza kanti sifunda namakhono ahlukene. Mina ngikhethe ukuthi ngisize ekhishini ukuze ngingahlali nje ngingenzi lutho olungagcina lungenza ngibuyela ekwenzeni izinto ezimbi” kusho uMnuz Sithole.
Ngokusho kuka Mnuz Sithole, uma usuyijwayele impilo yasemgwaqweni akubi lula ukuthi uphinde ujwayele ukuhlangana nabantu ngoba usujwayele inkululeko yokwenza noma yini. Echaza kabanzi ngokuthi kungani ehlala emgwaqweni uthi ingoba umkhulu wakhe wayemhlukumeza esemncane emva kokushonelwa umama wakhe. “Ngagcina sengibaleka ekhaya nokwenza ukuthi ngigcine sengizithola emgwaqweni. Ngifisa ukushintsha impilo yami ngithole umsebenzi ngisuke emgwaqweni ngizakhele impilo engcono. Ukuba kulendawo kunginika ithuba lesibili nengizimisele ukulisebenzisa ngendlela,” kusho uMnuz Sithole.
OWOSUTHU UTHI ANGEKE BALILAHLE ITHEMBA